LEGO Super Mario Black Friday သဘောတူညီချက်များ ၂၀၂၁ Brick Fanatics
အဲဒါငါပဲ၊ Lego စူပါမာရီယို Black Friday သဘောတူညီချက်များ ဟိ Lego Group နှင့် Nintendo တို့သည် ၂၀၂၁ အတွက်အသစ်စက်စက်လှိုင်းအသစ်များပြင်ဆင်ရန်အလုပ်များနေခဲ့သည်၊ သို့သော် Black Friday အတွက်ဤဗီဒီယိုဂိမ်းအခင်းအကျင်းအတွက်မည်သည့်လျှော့စျေးကိုရလိမ့်မည်နည်း။
စျေးလျှော့တာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတုန်းဘဲ စူပါမာရီယို Lego တတိယ p မှအစုံart၂၀၂၀ တွင် Nintendo theme စတင်ခဲ့ကတည်းက y လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်အပေးအယူရှိသည် LEGO.com အနည်းအများသာကွာခြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Black Friday အတွက်အားလုံးပြောင်းလဲနိုင်သည် Lego အဖွဲ့ရှိပြီးသားarted တွင်အပိုဆု VIP အမှတ်များအပါအ ၀ င်ပရိသတ်အသစ်များအတွက်မက်လုံးများပေးသည် St.arter သင်တန်းများနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းအစုံ.
Lego စူပါမာရီယိုစိန့်artBlack Friday သဘောတူညီချက်များသတ်မှတ်ပါ
မင်းရေထဲကိုငုပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် Lego စူပါမာရီယို theme, သင်၎င်း၏ st တစ်ခုမှစတင်ရန်လိုသည်artသင်တန်းများ။ မူရင်း Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း ၎င်းနောက် Expansion Sets များ၊ Power-Up Pack များနှင့်တည်ဆောက်နိုင်သောကျန်ရှိသောအရာများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သော Mario ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ စူပါမာရီယို Lego ကိန်းဂဏန်းများ။
Black Friday သည် st ကိုရယူရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်arter သင်တန်း (နှင့်တိုးချဲ့မှုအစုံအနည်းငယ်) နှင့်သင်၏စတင်နိုင်ပါစေ Lego စူပါမာရီယို စုဆောင်းခြင်း၊ VIP အမှတ်များနှင့်လက်ဆောင်များကိုနှစ်ဆတိုး။ ဖြစ်စေ၊ အလားအလာရှိလျှော့စျေးများ၏အားသာချက်ကိုယူခြင်းရှိမရှိစုဆောင်းခြင်း မာရီယိုနှင့်အတူ 71360 Adventures ကို.
Lego Super Mario Luigi StartBlack Friday သဘောတူညီချက်များသတ်မှတ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရှိသေးသည် Lego စူပါမာရီယို လူတိုင်း၏အကြိုက်ဆုံးရေပိုက်သမားကိုသူ၏စိမ်းလန်းသောသင့်တော်သောအစ်ကိုကယခုနှစ်တွင်သတ်မှတ်ခဲ့သည် Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်းမရ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် St. နောက်ဆုံးပေါ် St.artBlack Course ၂၀၂၁ မှအစောဆုံးသင်တန်း၊ သင်ဘာဖြစ်သည်ကိုသင်မသိပါ Lego အလားအလာရှိသောသဘောတူညီချက်တစ်ခုအပါအဝင်အုပ်စုသည်၎င်း၏လက်စွပ်ကိုတက်နိုင်သည် ၅၀၀၇၀၆၀ အသင်းလိုက်စုစည်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုစုစည်းပေးသော၊ Lego စူပါမာရီယို starter အစုံ
LEGO Super Mario Expansion Set Black Friday အပေးအယူများ
ကြီးကြီးမားမားဆောက်ဖို့စိတ်ကူးနေသလား Lego စူပါမာရီယို အပြင်အဆင်သို့မဟုတ်သင်၏ St သို့ရန်သူအသစ်များ (သို့) အတားအဆီးအသစ်နှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထပ်တိုးချင်ရုံပါarter သင်တန်း၊ စျေးနှုန်းမျိုးစုံတွင်ရနိုင်သော Expansion Sets များစွာရှိသည် LEGO.comမရ။ ပိုလို့တောင်ဆိုးပါသေးတယ် ၂၀၂၂ မှာစတင်ရောင်းချမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအပေးအယူများကိုတွေ့နိုင်သည် 71365 Piranha Plant Power Slide တိုးချဲ့ရန်သတ်မှတ်မည် နှင့် 71369 Bowser ၏ရဲတိုက် Boss တိုက်ပွဲတိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, ထိုအဖြစ် Lego အစုရှယ်ယာအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောပစ္စည်းများကိုရှင်းလင်းသည် အသစ်အစုံ.
LEGO Super Mario Character Packs Black Friday သဘောတူညီချက်များ
မျက်မမြင်အိတ်စွပ်အက္ခရာများကိုအခြားအစုဖြင့်ကြည့်နေသည် သေချာသလောက်နီးပါး ဇန်နဝါရီကိုရောက်ဖို့မင်းမှာဖမ်းဖို့အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူး 71394 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 3မရ။ ဤသေးငယ်သောအရာများတည်ဆောက်နိုင်လျှင်ပင် စူပါမာရီယို Lego Black Friday အတွက်ကိန်းဂဏန်းများကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့်၊ အိတ်ဆောင်ငွေဈေးရှိသောအက္ခရာများသည်လက်ဆောင်တစ်ခုဝယ်ခြင်းအတွက်အနည်းဆုံးသုံးစွဲမှုကိုကူညီရန်ပြီးပြည့်စုံသောခြင်းတောင်းဖြည့်စွက်စာကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အငြိမ်းစား LEGO Super Mario သည် Black Friday သဘောတူညီချက်များသတ်မှတ်သည်
ယမန်နှစ်ကအများစု (ဤနှစ်တွင်အချို့) Expansion Sets, Power-Up Packs နှင့် Character Packs များသည် အနားယူရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် Black Friday သောကြာနေ့တွင်သင်စျေးဆစ်နိုင်လိမ့်မည်။ ဟိ Lego အုပ်စုသည်အနားယူအငြိမ်းစားယူခြင်းကိုလျှော့စျေးနှင့်ရှေ့ဆက်သည် စူပါမာရီယို Lego အပါအဝင်အစုံ 71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ နှင့် 71384 Penguini Mario ပါဝါ Up-Pack ကို ထွက်လမ်းမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ Black Friday ကမင်းရဲ့စုဆောင်းမှုကိုအားကောင်းစေတဲ့အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်ဆုံးထွက်ရှိသမျှကိုပုံမှန်ပြန်စစ်ပါ Lego စူပါမာရီယို Black Friday ၂၀၂၁ သည်သူတို့ကြေငြာသည့်အတိုင်းသဘောတူညီချက်များနှင့်ဖြစ်သည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အားလုံးရဲ့ rundown အပြည့်အစုံအတွက် Lego Black Friday သဘောတူညီချက်များသည် ၂၀၂၁ တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။